Intlanzi yeLemon, yonke into oyifunayo kufuneka uyazi ngayo. | Ngeentlanzi
Ialam yeentlanzi iyaziwa kwihlabathi liphela ngenxa yencasa yayo emnandi. Intlanzi eninzi ngokwaneleyo unyaka wonke, kodwa ixesha apho ifumaneka ngobuninzi obukhulu ikwiinyanga zikaMeyi ukuya kuJuni. Igama layo lenzululwazi ngu Seriola dumerili kwaye yeyosapho lwe-caranidae. Ifunwa kakhulu kwi-gastronomy enamagama ohlukeneyo orhwebo nawasekhaya kwihlabathi liphela.
Ngaba ufuna ukwazi yonke into malunga nale ntlanzi ikhethekileyo?
1 Iimpawu zentlanzi yelamuni
2 Ukuziphatha kunye nendawo yokuhlala
3 Ukondla nokuzala
4 Ukuloba kunye nexabiso lesondlo
Iimpawu zentlanzi yelamuni
Oluhlobo lweentlanzi luyaziwa kwiindawo ezininzi zehlabathi kwaye kwingingqi nganye yaziwa ngegama. Umzekelo, eAndalusia ibizwa ngokuba amberjack, ubisi kunye neentlanzi zelemon. Kwelinye icala, kwii-Balearic Islands yaziwa njenge cirviola, cirvia, kunye nesirvia nakwiiCanary Islands njenge megregal kunye nelamuni.
Esi silwanyana sihlala kwindawo ezinesanti kwiindawo ezinamatye anzulu kufutshane neemitha ezingama-300. Xa kufika ubusika, bahlala elwandle kwaye bavela phezulu kuphela xa amaqondo obushushu ashushu efika ngentwasahlobo.
Inemiqolo ezisibhozo emqolo kwaye phakathi kwemitha engamashumi amabini anesithoba kunye namashumi amathathu anesihlanu emhlophe emqolo, imiqolo emithathu yeempundu, kunye namashumi amabini anesibini amhlophe amathambo emhlana. Umzimba wayo phantse ucabalele kwaye umile. Ukongeza, inamaxolo amancinci ajikeleze umzimba wayo. Intloko inkulu kwaye ijikeleze ngakumbi, ngamehlo amancinci, umlomo obanzi, kunye nomphunga omde, ojikelezayo onamazinyo amancinci.
Inomxholo wokugqibela oqaqambileyo oneentsiba ezimbini kunye namaphiko amabini emqolo. Umsila wayo ubunjwe ngokufanayo nezinye iintlanzi. Ngokubhekisele kumbala wayo, inenxalenye yomqolo oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nenxalenye ye-ventral exutywe phakathi kwemibala emhlophe nesilivere. Phantse uninzi lwazo lunomgca otyheli othe tyaba ogquma amanqwanqwa.
Ubungakanani bazo bunokwahluka phakathi kwemitha kunye nemitha enesiqingatha, kuxhomekeke kubudala babo. Xa ifikelela ebudaleni, Iyakwazi ukuba nobunzima ukuya kwi-60 kilos. Ubungakanani nobunzima bayo buxhomekeke ngokupheleleyo kwindawo ehlala kuyo, kuba amaqondo obushushu kunye nemisinga yolwandle yiyo egqiba ukukhula kwayo.
Ngokwesiqhelo le ntlanzi inayo uzolile, ngaphandle kobundlobongela nezinye iintlobo. Ukuba yintlobo yodwa, inemikhwa ye-pelagic. Le ntlanzi ibonakala kuphela xa isenza amaqela okanye izibini ngexesha lokuzalisa. Nje ukuba intlanzi yelamuni ivelise kwakhona ngexesha lasentwasahlobo, babuya bahlala kubunzulu bolwandle.
Xa kufika ixesha lasehlotyeni, kunokwenzeka ukuba uyiqwalasele kufutshane nomphezulu wonxweme. Xa befika ebudaleni, benza amaqela amakhulu kufutshane nezinto ezidadayo ezinje ngejellyfish kunye neesalps.
Okwangoku indawo yokuhambisa igubungela phantse onke amanzi olwandle lwehlabathi. Indawo apho uninzi lwayo lukhulu khona isemanzini oLwandlekazi lweAtlantic, oludlula kwiMeditera kunye neBay yeBiscay.
Indawo yayo ikwezinzulu zolwandle kuluhlu oluphakathi kwe-80 kunye ne-300 yeemitha.
Ezi ntlanzi zizidalwa ezizidlayo, kuba ukutya kwazo kusekelwe ngokupheleleyo ezinye iintlanzi kunye nezinambuzane, ukongeza kwiskwidi kunye ne-cuttlefish. Le ntlanzi ihlala ibanjiswa ngelixa izama ukuzingela ezinye iintlobo ezinje ngehashe mackerel, ii-crustaceans, amantshontsho kunye ne-bogas. Xa indlala iyayixabisa, iyakwazi ukutya nayiphi na into ehambahamba kuloo ndawo.
Ngokumalunga nokuzala, sifumana izinto ezininzi ekufuneka sizithathele ingqalelo. Indawo apho zivelisa khona zixhomekeka kwizinto ezinje ngobushushu kunye nendawo yemozulu efumaneka kuyo. Ihlala isenzeka ngexesha lasentwasahlobo nasehlotyeni, xa amaqondo obushushu enyuka kwaye kumnandi ngakumbi ukukhathalela ifry.
Ukuzaliswa kwakhona kwenzeka xa intlanzi yelamuni isiba ngabantu abadala (ngesiqhelo kwisithuba seminyaka emine kumadoda nakwiminyaka emihlanu kubafazi). Xa oku kusenzeka, ukuzala kunokwenzeka. Okwangoku ebomini babo bahlala bebungakanani be- malunga neesentimitha ezingama-80 kunye nobunzima beekhilogram ezili-12. Ezi ntlanzi zikhula ngokukhawuleza okukhulu, zifikelela kumasentimitha angama-40 ubude kwiinyanga ezintandathu zokuqala.
Xa intlanzi ivelise iminyaka eliqela Bayakwazi ukufikelela kubude obungaphezulu kwemitha enesiqingatha kwaye banokuba nobunzima obungaphezulu kwe-60 kilos. (Kufunyenwe iisampulu ezinobunzima obungama-80 eekhilogram).
Intlanzi yelamuni ikhetha indawo yokuphinda ivelise kwiindawo ezinezikolo ezincinci kwaye ilungisa indawo yokuhlala kufutshane nezinto ezidadayo ezinje ngamaqonga, iiboys okanye ezinye izinto ezikufutshane nonxweme. Xa behamba ngenkqubo yokuzala kunye nokuzala kwenzeka, amaqanda aqanduselwa kunye nefry. Xa oku kusenzeka, bayasasazeka kwaye bafuna ukuba bodwa.
Omabini amaqanda nemibungu athathwa yimisinga yolwandle kwaye ngabo abagqiba kwelokuba bahlale kwezona ndawo bacinga ukuba zezona zikhuselekileyo. Le nkqubo ihlala ithatha malunga neenyanga ezintlanu.
Ukuloba kunye nexabiso lesondlo
Ukuloba kwezi ntlanzi kuqheleke kakhulu kwimihla ekhankanywe apha ngasentla. Enkosi kwinto yokuba benyukela elunxwemeni, kulula ukuba bafumane kwaye babanjwe. Ukuloba kwayo akubonisi ngxaki kwaye kuhlala kuyimpumelelo ngenxa yokuba elona xesha lifanelekileyo lokubanjwa kwayo kunye neendawo esiqhele ukuya kuzo ziyaziwa. Nangona ngeenyanga zika-Meyi nangoJuni zininzi kakhulu, ezi ntlanzi zihlala zifumaneka unyaka wonke.
Ubunzima bokuloba kwabo kubangelwe ukumila komzimba wakho. Ngale fom uyakwazi ukwenza ukuqubha kwakhe ngamandla amakhulu kunye nobukhali. Ngobu buchule bayakwazi ukuhlala elwandle ixesha elide.
Intlanzi yelamuni yile indebe yokwenene yabalobi beamateur ukusuka kunxweme nakwiilwandle eziphakamileyo. Eyona nto inkulu, kokukhona izisa ulwaneliseko. Ukongeza, ixabiseke kakhulu igalelo layo lesondlo elityebileyo kwiiproteni, iicarbohydrate, iOmega 3, iCholesterol, iiminerali, isinyithi, ikhalsiyam, ipotassium, izinc, isodiyam, iivithamini, A, E, B, B9, B12 kunye neB3.
Njengoko ubona, intlanzi yelamuni iyaziwa kwaye ifunwa kwihlabathi liphela ngenxa yencasa yayo etyebileyo kunye nempumelelo yayo yokuloba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yelamuni